Luqada Finnishka iyo Iswidishka ee Helsinki - InfoFinland
Magaalooyin > Helsinki > Nolosha Helsinki > Luqada Finnishka iyo Iswidishka ee Helsinki
Helsinki waa degmo labo luqadle ah. Finnishka iyo Iswidishka waxaad tusaale ahaan ku isticmaali karaa dhammaan adeegyada magaalada Helsinki.
Barashada luqada Finnishka iyo Iswidishka
Helsinki waxaa ka jira fursado badan oo lagu baran karo luqada Finnishka iyo Iswidishka. Waxaad codsan kartaa in aad jaamacadda Helsinki ka barato luqada ama waxaad aqoontaada luqadda sare ugu qaadi kartaa kafateeriyada luqada ee maktabadaha. Haddii aad shaqaale tahay waxaad luqada Finnishka ama Iswidishka ka baran kartaa waxbarashada la-qabsashada (kotoutumiskoulutus).
Adigoo kaalmeysanaya Finnishcourses.fi waxaad kooras luqada Finnishka ah oo kugu haboon ka raadsan kartaa Helsinki, Vantaa, Espoo ama Kauniainen. Koorasyda luqada Iswidishka waxaa laga helaa isku-xirka ku yaal bogga hore ee adeegga. Adeegga waxaad ku isticmaali karaa Finnish, Ingiriis iyo Ruush. Koorasyadu waa kuwa dadka oo dhan u furan inta badanna waa kuwo lacag ah.
Iska diiwaangelinta koorasyada luqada waa sida guud 2-8 todobaad ka hor billaabashada kooraska. Koorasyada qaarkood waa in la codsadaa. Koorasyada qaarkood waxaa la isaga diiwaangelin karaa shabakadda.
Waxaad Finnishka iyo Iswidhishka ka baran kartaa koorasyada machadyada dadka waaweyn iyo marka aad waxbarashada xirfadda qaadaneysaba. Machadka waxbarashada dadka waaweyn ee afka Iswidhishka ee Helsinki Arbis wuxuu bixiyaa koorasyo badan oo afka Iswidhishka ah. Cinwaanka Ilmonet.fi waxaad ka heleysaa dhammaan koorasyada ay bixiyaan machadyada waxbarashada dadka waaweyn iyo machadka aqoon-kororsiga dadka ee aagaha u dhow caasimadda.
Raadinta kooraskaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Haddii aad macaamil ka tahay Xafiiska shaqada iyo meheradaha, waxaad Finnishka ama Iswidishka baran kartaa iyagoo qayb ka ah waxbarashada la-qabsashada. Weydii khabiirkaada xafiiska shaqada iyo meherada macluumaadka ku saabsan waxbarashada l-qabsashada.
Helsinki waxaa luqada Finnishka uga baran kartaa dad cusub ku baran kartaa kafateeriyada luqada ee maktabadaha HelMet iyo kooxaha wada sheekeysiga. Waxaad halkaas ku baran kartaa ku hadalka, haddii aad xittaa waxyar ka taqaan luqada Finnishka. Kafateeriyada luqadu waa lacag la’aan, mana u baahnid in aad iska diiwaangeliso. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kafateeriyada luqada weydii tusaale ahaan maktabadda Oodi.
Luqad ku barashada wada qaxweyntaFinnish | Ingiriis
Helsinki waxaad ku sameyn kartaa imtixaanka guud ee luqada (YKI) Finnishka ama Iswidishka. Bogagga shabakadda Maamulka Waxbarashada waxaa laga helaa mashiin wax raadiya oo aad ka hubsan karto goobaha iyo waqtiyada aad sameyn karto imtixaanka. Waa in aad si degdeg ah arrinta wax uga qabataa, sababtoo ah Helsinki waxaa jooga dad badan oo ka qaybqaata imtixaanka shahaadada YKI.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan imtixaannada YKI iyo shahaadooyinka kale luqada nogga InfoFinland Shahaadada rasmiga ah ee aqoonta luqada.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan agabka waxbarashada ee internetka ku jira iyo talooyinka barashada luqada ka aqri bogga InfoFinland: Luqada Finnishka iyo Iswidishka.